Vakanaka, Vakuru, uye Vanotyisa neArtificial Intelligence | Martech Zone
Pandakaburitswa zvine rukudzo kubva kuNavy muna 1992, yaive nguva yakakwana. Ndakaenda kunoshandira Virginian-Pilot muNorfolk, Virginia - kambani yakagamuchira zvizere IT Innovation sechikamu chemazano ayo epakati. Isu takaisa fiber uye tikabvisa mutsara-we-saiti setiraiti, isu takaomarara-wired programmable-logic macontroller kumaPC uye takatora data rakatibatsira kunyatsogadzirisa kuchengetedza kwedu kuburikidza neIntranet, uye kambani yemubereki, Landmark Communications, yanga ichitoisa mari zvakanyanya mu kuwana mapepanhau online. Ndaiziva kuti Webhu yakanga iri chimwe chinhu chinoshandura hupenyu kwandiri.
Uye makore maviri chete apfuura, Sir Tim Berners-Lee yakavaka maturusi ese anodiwa paWebhu inoshanda, kusanganisira HyperText Transfer Protocol (HTTP), Mutauro weHyperText Markup (HTML), yekutanga Web browser, yekutanga HTTP server software, yekutanga dura rewebhu, uye iyo mapeji ekutanga eWebhu izvo zvakatsanangura chirongwa ichocho. Bhizinesi rangu uye nebasa rangu chairo zvese zvakatanga nekuda kwekuvandudza kwake, uye ini ndaigara ndichida kumuona achitaura ega.
Makore makumi maviri nemashanu Gare gare uye IT Shanduko
Maka Schaefer akandikoka kuti ndibatane naye Luminaries - Kutaura kune Vakajeka Pfungwa muTekinoroji, Dell podcast iyo inopa hukuru hukuru mukati mevatungamiriri kuseri kwemakambani epasirese epasi rose. Kunyange ini ndaiziva Dell sekambani yaitengesa desktops uye malaptop kune vatengi uye maseva kumabhizinesi - ini handina kumbobvira ndawana ruzivo nezve yakazara ecosystem yeDell Technologies kusvika uyu mukana. Rwave rwuri rwendo runonakidza - zvese kubva kushanda naMark wandinoremekedza zvakanyanya - uye kuwana nzwisiso mune ramangwana kana uchibvunzurudza hutungamiriri hwaDell.
Zvimwe pane izvo gare gare!
Sechikamu chepurogiramu, takakokwa kuti tipinde Dell EMC Nyika muLas Vegas (kwandiri kunyora izvi pahotera yangu kamuri dhesiki). Takazoona, munguva pfupi yapfuura, kuti Berners-Lee anga achitaura pamusoro chakagadzirwa Intelligence. "Giddy" ndiro chete izwi rakakodzera kushandisa kutsanangura kufara kwangu. Ndinofunga Mark akatondiudza kuti ndidzikame pane imwe nguva. Iva nechokwadi chekutarisa Pfungwa dzaMark pane kutaura uku futi!
Sir Tim Berners-Lee paArtificial Intelligence
Mutsara wekutaura wakaputirwa nehafu-nzira kutenderedza Sands Expo uye ini ndaive nekutenda kwaMako akabata nzvimbo mumutsara sezvo ini nekukurumidza ndakarongedza iyo michina kubva kune yedu yazvino yekurekodha. Takagara pasi, uye Mark akabvuta pikicha yangu pamusoro… woohoo! Maminetsi mashoma gare gare Sir Tim vakauya pachikuva ndokutanga hurukuro. Akagovana rudo rwake rwekutanga naIsaac Asimov naArther C. Clarke, vanyori vaviri avo baba vangu mushakabvu vakandizivisa ndichiri mudiki (pamwe naStar Trek, hongu!). Pamakore gumi nematanhatu mukuru wangu, zvaive zvichinakidza kufunga nezve kufanana kwehupenyu hwedu - kunyangwe ndichiziva kuti handife ndakarohwa. Hongu, sekunge kuti ndiwo chete musiyano.
Berners-Lee ita kuti munhu wese azive kuti anga asiri nyanzvi yeAI, asi anga aine dzimwe pfungwa sekubatsira uye kutya kunze uko. Shanduko idzo dzinouya kubva kuAI dzinenge dzisingakwanisike panguva ino, asi hapana anopokana nemikana kana bhenefiti isingagumi kurudzi rwevanhu.
As DellEMC inofambira mberi matekinoroji ayo, semuenzaniso, hyper-convergence neAI yatove pakatarisana - masisitimu anokura komputa, chengetedzo, uye netiweki zvine hungwaru semakambani anovada. Iko kuderedzwa kwekubatanidzwa kukuru, masystem akaparadzaniswa, uye kukanganisa kwevanhu kuri kubatsira makambani mazhinji uye akawanda kusvika kuvhura velocity, izwi rakanzwikwa kakawanda pachiitiko ichi.
Berners-Lee akakurukura kufambira mberi kwemagariro kuri kuitika izvo zvinobatsira kudzikisa marara, kuwedzera kushanda zvakanaka, uye kugadzirisa kwenzanga kwevanhu.
Chimbofunga izvi pamusoro pekambani kuona, uine masisitimu emari anogona kufungidzira, kukurudzira, kana kutogadzirisa zvichienderana nehutano hwako hwemari. Kana masystem evashandi anovandudza masisitimu ehukama anoenderana nezvinokurudzirwa nevashandi. Kana zvekurima masisitimu ayo anonatsiridza kushandiswa kwemishonga yekuuraya zvipuka kana mvura nesimba pasina kuzivisa murimi Kana tekinoroji makambani anokwanisa kukwirisa nekugadzirisa zvivakwa uye kunyangwe ruzivo rwevashandisi pasina chikonzero chekugadzira zvirongwa zvechigadzirwa, mapoka ekutarisa, kana kuyedza.
Kana, zveshuwa, kushambadzira kwekunyepedzera kwehungwaru kunoenderana nemutauro, kupa, masvikiro, uye migero kuzviitira uye kukwezva tarisiro! Wow!
Ko Zvakadii nezveSkynet uye Kusingagumi?
The singularity ndiyo fungidziro yekuti kugadzirwa kweunyanzvi hukuru kunokanganisa kukura kwetekinoroji, zvichikonzera shanduko isinga nzwisisike kubudiriro yevanhu.
Mune mamwe mazwi, chii chinoitika kana masisitimu achigadzira masystem anopfuura ekugona kwedu kuzvinzwisisa? Sayenzi yekunyepedzera yakagara ichitsanangura izvi seTerminator, uko tekinoroji inogadza vanhu zvisina basa uye inotiparadza. Chiono chaBerners-Lee hachisi chemhirizhonga asi zvakadaro zvinomutsa kunetseka kukuru. Imwe yenyaya dzaakakurukura ndeyekuti marobhoti haana uye haazove nawo kodzero. Uye vatungamiriri mubhizinesi nehurumende vachatofanira kumisikidza zvakaomarara kutonga kupfuura Mitemo mitatu yaIsaka Asimov.
Ngatiparadzanisei zvombo zve robotic zvine hungwaru zvinototyora mutemo # 1. Dambudziko, sekutsanangurwa kwaBerners-Lee nderekuti marobhoti haasi iwo chaiwo matambudziko - chakagadzirwa njere ndizvo. Makambani ndivo tekinoroji uye vese vari kuzove vachishandisa AI kubatsira neese mativi ebhizinesi ravo. Maka anowanzo kugovera Domino's Pizza semuenzaniso. Ivo ikambani yepitsa ine tekinoroji here? Kana ivo vari a tekinoroji kambani yakavakirwa kununura pizza? Izvo zvakanyanya zvekupedzisira nhasi.
Uye dambudziko? Makambani do vane kodzero; saka, matekinoroji avo vane kodzero dzekuzvarwa. Uye nemumiriri, huchenjeri hwekugadzira hwakagadzirwa nekambani iyoyo huchave nekodzero. Icho chaicho chirevo chinoda kukurukurwa sehungwaru hwekunyepedzera hunowedzera mukuzivikanwa uye kushandiswa Fungidzira kambani hombe, semuenzaniso, iyo ine chikuva chinoshandisa huchenjeri hwekugadzira kugadzira chimwe chinhu chinobatsira kune avo vagovana navo - asi izvo zvinoparadza vanhu. Haasi marobhoti atinofanira kunetsekana nawo, huchenjeri hwekugadzira husina masimba ekuti tione kuchengetedzeka nekuchengeteka.
Berners-Lee anofunga kuti kusazvibata kunogona kuve kwechokwadi mukati memakore makumi mashanu. Akataura zvakare zvisina mubvunzo kuti ndeyake rational kufunga kuti AI ichapfuura ungwaru hwevanhu. Tiri kurarama munguva dzinoshamisa! Handitendi kuti Berners-Lee akavhunduka kana kutya ramangwana iri - akangoti makambani, hurumende, uye kunyangwe nevanyori venhau dzesainzi vanofanirwa kukurukura nyaya idzi zvakanyanya kana tichitarisira kuona ramangwana redu rakachengeteka.
Kuzivisa: Dell akabhadhara zvese zvandinoshandisa kuti ndiende kuDell EMC World uye ndiye mutengi wangu weiyo Zvimwenje podcast. Ive neshuwa yekupindamo uye kutiongorora, isu tinonyatsoda mhinduro yako!
Tags: aiberners-leekusanganaDelldell emcdell emc nyikahyper-kusanganalas vegaszviedzaMaka Schaefertim berners-lee
Kodzero Kwegore: Gadzirisa Zvemukati Kodzero Kodhi muReal-Nguva